Takelaka 120 ° anatomika fanidiana ny fanarenana an'i China (loaka iray mifantina karazana visy roa) orinasa sy mpanamboatra | Shuangyang
takelaka 120 ° anatomika fanarenana fanamboarana (loaka iray fidio karazana visy roa)
• Tra-boina azo tratrarina:
Famoahana tapaka tapaka, vaky tsy miovaova, tsy kilema ary kileman-taolana.
• Fanarenana mandible:
Sambany na fanarenana fanindroany, ampiasaina amin'ny grefy taolana na tsy fahatapahan-kazo misy ny taolana (raha tsy misy fampidirana taolana voalohany, ny takelaka fanarenana dia miantoka fotoana voafetra fotsiny, ary tsy maintsy manao ny fikajiana taolana faharoa hanohanana ny pate fanarenana).
• Ny elanelana misy ny takelaka fanarenana dia endrika noforonina ho an'ny fametahana mandritra ny fiasa, manatsara ny fisehoan'ny fifantohana amin'ny adin-tsaina amin'ny faritra manokana sy ny tanjaka havizanana.
• ny lavaka iray dia mifidiana karazana visy roa: ny fanidiana lovia anatomika fanarenana maxillofacial dia afaka mahatsapa fomba roa raikitra: mihidy sy tsy mihidy. Ny fanidiana ny visy dia miaro ny taolana ary miaraka amin'izay koa manidy ny takelaka, toy ny fanamafisana ivelany. Ny visy tsy mihidy dia afaka manamboatra zoro sy famatrarana famatrarana.
screw2.4mm visy mandondona tena
Sokiro fanidiana lock2.4mm
fandavahana fantsom-pitsaboana φ1.9 * 57 * 82mm
mpamily volo loha: SW0.5 * 2.8 * 95mm
Amin'ny maha-taova lehibe ny tarehy hitazonana ny hatsaran-tarehy, ny endrika mandible dia mitana andraikitra lehibe amin'ny hatsarana tarehy, maro ny antony toy ny trauma, ny aretina, ny fivontosan'ny fivontosana sns. Ny tsy fetezan'ny moka dia tsy misy fiatraikany amin'ny fisehoan'ny marary ihany, fa koa miteraka tsy fetezana amin'ny fitsakoana, fitelina, fitenenana ary asa hafa. Ny fanarenana mandibular tsara dia tokony tsy hahatratra ny fitohizan'ny aina sy ny fahamendrehan'ny taolana mandibular ary hamerina ny endrika isehoan'ny tarehy, fa koa manome ny fepetra fototra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ireo fiasa ara-batana aorian'ny fandidiana toy ny mitsako, mitelina ary miteny.
Ny antony tsy fetezana mandible
Fitsaboana fivontosana: ameloblastoma, myxoma, carcinomas, sarcomas.
Lozam-pifamoivoizana mahatsiravina: matetika no vokatry ny ratra haingam-pandeha toy ny basy, lozam-pifamoivoizana ary lozam-pifamoivoizana indraindray.
Toe-javatra mamaivay na areti-mifindra.
1. Avereno ny endrika tany am-boalohany ny ampahatelony ambany amin'ny tarehy sy ny azo zahana
2. Tazomy ny fitohizan'ny mandible ary averina amin'ny laoniny ny fifandraisan'ny toerana eo anelanelan'ny mandible sy ny tavy malefaka manodidina
3. Avereno amin'ny laoniny ny fihinana, ny fitelina ary ny fitenenana tsara
4. Tazomy ny lalan-drivotra ampy
Misy karazany efatra ny mikororoka fanamboarana lesoka mandibular. Mety hisy fiatraikany amin'ny endrika ivelany ny fihenan'ny fivontosana sy ny fivontosana amin'ny fivontosana ary mitarika ho amin'ny tsy fahampiana miasa toa ny malocclisiona noho ny ratra amin'ny hozatra iray. Mba hanamboarana ny lesoka hita maso ary hanarenana ny asany, maro ny fomba fandidiana. novolavolaina, ary ny fahasarotana amin'ny fanarenana mahomby ny mandible dia ny fisafidianana ny fomba tsara indrindra. Noho ny fahasarotan'ny kilema mandibular, dia mbola tsy misy dikany ny fanasokajiana sy ny fomba fitsaboana maoderina, azo ampiharina ary eken'ny besinimaro ekena.Schultz et al. naneho fomba fanasokajiana tsotsotra vaovao sy ny fomba mifanentana amin'ny fanarenana sy fanamboarana ny mandible amin'ny alàlan'ny fampiharana, izay navoaka tao amin'ny diary farany an'ny PRS. Ity fanasokajiana ity dia mifantoka amin'ny tsy fivadihan'ny vaskola ao amin'ny faritra misy ny mpandray, miaraka amin'ny tanjona hanamboarana marina mandibular sarotra lesoka amin'ny alàlan'ny fomba mikraoba. Ny fomba dia mizara efatra voalohany arakaraka ny fahasarotan'ny fandidiana fanarenana. Ny midline ambany amin'ny mandible dia ny fetra. Ny karazana 1 dia nisy lesoka iray teo amin'ny lafiny iray izay tsy misy ny Angle mandibular, ny karazany 2 kosa dia nisy lesoka iray teo amin'ny lafiny telo izay misy ny ipsilateral mandibular Angle, ny karazana 3 dia nisy lesoka roa tonta izay tsy nisy lafiny roa amin'ny Angib mandibular, ary ny karazana 4 kosa dia nisy kilemaina roa tonta nahatafiditra ny lafiny roa na Angla mandibular roa tonta. Ny karazany tsirairay avy dia mizara ho sokajy A (azo ampiharina) sy ny karazany B (tsy azo ampiharina) arakaraka ny hoe mety ho an'ny anastomose ireo sambo ipsilatera. Ny karazana B dia mitaky anastomose an'ireo sambo vozon-tranonjaza mifanohitra. Ho an'ny tranga 2 dia ilaina ny manondro raha tafiditra ao ny fizotran'ny condylar hahafahana manapa-kevitra amin'izay fitaovana ampiasain'ny graft: Ny fidiran'ny condilar unilateral dia 2AC / BC, ary ny fidirana amin'ny condylar dia 2A /B. Miorina amin'ny fanasokajiana etsy ambony sy ny fiheverana ny lesoka amin'ny hoditra, ny halavan'ny lesoka mandibular, ny filàna solila ary ny toe-javatra manokana hafa, ny mpitsabo dia mamaritra ihany koa ny karazana tadin'ny taolana malalaka ampiasaina.
Ny takelaka fanarenana mialoha dia natao hampiasaina amin'ny alàlan'ny fandidiana am-bava sy maxillofacial, trauma ary fandidiana fanarenana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanarenana mandibular voalohany, ny tapaka tapaka ary ny tetezana vonjimaika miandry ny fanarenana faharoa ahemotra, ao anatin'izany ny fery mandibles miorina sy / na atrophic, ary koa tapaka tsy marin-toerana. Tombontsoa ho an'ny marary - amin'ny alàlan'ny fikatsahana vokatra mahafa-po mahafa-po sy hampihenana ny fotoana iasana. Ny takelaka voafaritra manokana ho an'ny marary dia manafoana ny adin-tsaina mekanika ateraky ny takelaka miondrika.
Teo aloha: mihidy lozisialy 120 ° L fanarenana maxillofacial (torolàlana amin'ny kofehy)
Manaraka: fantsom-bozaka orthodontika 1.6 fandavahana tena & fanoratana
Fanidiana ny takelaka Arc 120illillillacial Maxillofacial
Mihidy lovia mahitsizoro Maxillofacial
Fanidiana ny takelaka mahitsy mahitsy Maxillofacial
Mihidy takelaka mahitsy Maxillofacial
trauma maxillofacial lovia kely 110 ° L
fanidiana lovia arina micro maxillofacial
lozam-pifamoivoizana maxillofacial mini plate Y roa